Umhla My Pet » Ngaba Pet Allergies and Dating zihlale?
Ngoko ke, sele umfumene umntu ukuba ufuna ukumazi ngcono. Xa uthetha nabo, nokuba kwi-mntu okanye online, kukho uncumo ebusweni bakho. You feel that things couldn’t get any better than they are, uze ke ngoko wazi ukuba isilwanyana uyalisa. Yintoni umntu ukuba enze? kuya kufuneka ukuba ningayekeleli ulwalamano ngenxa nokwaliwa yakho? Ngaba zikho ezinye iindlela hayi babone umntu kwakhona? Kuba abantu abaninzi, nazi.
Okokuqala kwaye ngaphambi kwento yonke, Makungabikho mntu wazi ukuba lo ngumvuka wokungalungelani. Oku kubalulekile ukuba ulwalamano kwaye banyaniseke (ukuqala nge), kwaye baye bakwazi ukuba unciphise basabela ukuba. njani ukwenza oku? Bakwazi ukuqinisekisa ukuba banxibe iimpahla ezintsha phambi komhla yakho (abangenawo intsebenziswano kunye pet emva kokuba benxibe). Ukongezelela, ukuze babe ibhrashi ilinti okanye into efana ukusebenzisa emva kokuba ufika umhla wakho (if their pet rides in the car and there is a transfer from the car to their clothes).
Ummandla elilandelayo kujoliswe ukwazi ubuzaza lokwaliwa yakho. Ngaba athathe amayeza nezidlo iOTC kwaye akwazi ukusingatha ngokuhlwa? Okanye ngaba uya sokungamelani namachiza eziya kufuna EpiPen? Kuba abo efuna EpiPen, kuya kufuneka ukuba ukuhlola ubudlelwane kwinqanaba olukhulu, because literally, your health is at risk. kuba abanye, nawe nje qiniseka ukuba uthathe amayeza akho nezidlo phambi kokuba kunye nabo, uze iliso osabela ngayo njengoko ubusuku lihamba.
Ukuba uchitha ixesha endaweni yabo, baya kumisa igumbi apho isilwanyana akuvumelekanga. Njengoko umaleko ngakumbi zokukhusela, ukuze babe ukubaleka umatshini ucoco ukugcina zamavumba ngaphandle emoyeni. Kukho iimveliso ezininzi eziphezu zentengiso onesifo nezidlo. Ezi mveliso kuya kunciphisa umyinge dander emoyeni, okanye basebenze asisithintelo ukugcina zamavumba nezidlo ezisuka kungena kwindawo ezikhethiweyo.
Kuba baninzi abanale nezidlo, sele baya kuba ezi resp nabo, kodwa akuyi inibulale into ungaziphindi. Qinisekisa ukuba usoloko izihlunu ngasekunene. Ukuba nokwalisa ezibangela ukurhawuzelelwa, amehlo alilayo kwaye ngaphezulu, nawe usenokuziva kangako ukuba umhla wakho ukuba impumlo yakho rhoqo isebenza okanye kubonakala ngathi ndikhalayo. Uyakwazi ukuba ezinye nezidlo iliso ihle nani kwakunye. This will not only help flush the allergens from your eyes but will also help with the redness and irritation that will be present.
Yenza nokwalisa bakho kubangela ukukhohlela? amathontsi ukukhohlela ilozenji nasemqaleni kubalulekile ukuba kubekho umhla uxinzelelo yancitshiswa. How many times have you gotten a tickle in your throat and the more you cough the drier your throat gets? Ezinye ilozenji okanye iilekese nzima ungadibanisa ukufuma nje ngokwaneleyo ukuba arholwe intlantsi kunye ingubo nomqala wakho ukuze ukwazi ukunikel 'ingqalelo ngomhla wakho.
evulelekileyo, ngokunyaniseka ekulungiseleleni kancinane, Usenako ulwalamano mnandi nangona une aleji ngesilo.